Naagaha buuran miyaa qurux badan mise kuwa caatada ah - iftineducation.com
Naagaha buuran miyaa qurux badan mise kuwa caatada ah
iftineducation.com – Isbaddalka dookha ragga xagga jirka haweenka, xiliyadii hore waxay aheed mid loolan loogu jiro sidii lagu heli lahaa naag buuran, ninka qaba naag caata ah ama aan buurneen wuxuu nin ka dhawaacan qalbiga isaga oo isku dayi sidii naagtiisa uu uga dhigi lahaa naag buuran, halka gabadha caatada ah ay aheed mid markaas suuqa guurka ka xiran ama dib u dhac uu ku yimaado dhanka guurka.
isbadalka dunida ayaa keenay in marba wax la xiiseeyo, xiisahaas oo noqday in naagta caatada ah aan hilibka laheen noqoto mid aad loo xiiseeyo, ragga xiligaan jira ayaa ku faana helida qof caata ah.
Gabadha caatada ah ayaa ka caafimaad wanaagsan midda buuran, sida ay ku warameen dhaqaatir badan, midaan ayaa noqoneeso mid dumar badan in ay ku dadaalaan sidoo ay u dhimi laahaayeen hilibka badan.
Dhanka kale Wilam Asperk oo ah Dhaqtar ayaa sheegay in gabadha ay ku qurux badantahay caatada wuxuuna sheegay in ishu qaban karto ama ragga ay sii jiidan karto.
Somalia ayaa la sheegay in ay kamid tahay wadamada naagahooda aadka u buurbuuranyihiin, buurnaantaas oo timaada inta badan guurka kadib.
laakin xagga galmada dooqa nimanka waa kala duwan yahay, niman waxay ku raaxaystaan naagaha caatada ah oo naasaha yaryar, ragna waxay aad u rabaan naagaha buuran oo leh naaso waaweyn iyo dabo weyn, quruxda ruuxba si buu u arkaa, laakin in la qiimeeyo naagaha caatada waxaa ka dambeeyay shirkadaha reer galbeedka oo soo sara qalabka rijiimka si ay uga helaan shaqo iyo lacag is caataynta
R/Wasaaraha oo ka Laabtay Xukuumaddii